Fizotry ny fangatahana Visa Indiana an-tserasera, fampahalalana momba ny mpitsidika
«Vaovao sy vaovao fampahalalana
India Visa Form Form dia endrika miorina amin'ny taratasy hatramin'ny taona 2014. Hatramin'izay, ny ankamaroan'ny mpandeha ary mahazo tombony amin'ny fizotran'ny fangatahana amin'ny Internet. Fanontaniana iraisana momba ny Fampiharana Visa any India, momba izay mila mahavita azy, ny fampahalalana takiana amin'ny fangatahana, ny faharetan'ny fotoanany, ny fepetra mialoha, ny fepetra takiana amin'ny fahazoana alalana, ary ny tari-dàlana amin'ny fomba fandoavam-bola dia efa nomena amin'ny antsipiriany amin'ity. rohy.
Misy fepetra manaraka ireto amin'ny fizotran'ny fangatahana Indiana Visa:
dingana 1: Vitanao Fangatahana fangatahana Indiana Visa.
dingana 2: Mandoa vola ianao amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo 135 vola mampiasa carte de crédit, carte de crédit, cheque, wallet, paypal miankina amin'ny firenenao.
dingana 3: Manome antsipiriany fanampiny ilaina ianao.
dingana 4: Mahazo Visa Indiana elektronika amin'ny Internet ianao (eVisa India).
dingana 5: Mandehana any amin'ny seranam-piaramanidina ianao.
Fomba isafoana: Amin'ny tranga vitsy dia afaka mifandray aminao izahay mandritra ny dingana ho an'ny Fangatahana Visa Indiana toy ny rehefa very ny pasipaoronao, nangataka indray ny visa raha mbola Visa ankehitriny i Visa ankehitriny, na mangataka antsipiriany fanampiny momba ny tanjon'ny. ny fitsidihanao araka ny takian'ny Birao fifindra-monina ao amin'ny Governemanta Inde.
Fanamarihana 1: Tsy mila mandeha any amin'ny Vaomiera Ambony Indiana na masoivoho Indiana ianao na amin'ny dingana rehetra amin'ny fizotry ny fangatahana.
Fanamarihana 2: TSY tokony handeha any amin'ny seranam-piaramanidina ianao mandra-pahatongan'ny vokatra ny India Visa fampiharana no nanapa-kevitra. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia izao no fiafarany mahomby miaraka amin'ny sata an'ny Marina aloha.
Inona ny antsipiriany takiana ao amin'ny Format Application Visa India?
Ny antsipiriany manokana, ny antsipirian'ny pasipaoro, ny toetra ary ny antsipirian'ny heloka bevava taloha izay takiana alohan'ny hanaovana ny fandoavana.
Rehefa vita ny fandoavam-pahombiazana dia ilaina ny pitsopitsony fanampiny miankina amin'ny karazana Visa izay napetrakao sy ny faharetan'ny visa. India Visa Application Application dia miorina amin'ny karazana sy ny faharetan'ny visa.
Inona ny dingana ahazoana ny Visa Indiana?
Ny dingana dia mampihatra-tserasera, manaova fandoavam-bola, manome antsipiriany fanampiny. Ny antsipiriany fanampiny takiana aminao dia angatahana amin'ny mailaka izay nosoratanao tao amin'ity tranokala ity. Azonao atao ny manome antoka tsara ny antsipiriany fanampiny amin'ny fipihana ny rohy ao amin'ny mailaka.
Mitaky ny antsipiriany ao amin'ny fianakaviako ve ny Visa Indiana Visa ho ampahany amin'ny Fomba Fangatahana India Visa?
Aorian'ny fametahana ny antsipirian'ny fianakaviana mandoa ny vola, dia takiana amin'ny ankamaroan'ireo tranga ireo ny antsipirian'ny mpivady.
Raha tonga amin'ny Business to India aho, inona ny antsipiriany takian'ny India Visa Application Form avy amiko?
Raha mitsidika an'i India ianao hanao raharaham-barotra na orinasam-pandraharahana, dia hanontaniana amin'ny antsipirihany momba ny orinasa indiana ianao, anarana iray fanovozan-kevitra any India sy ny karatra fitsidihanao / karatra fandraharahana. Raha mila tsipiriany misimisy momba Fitsidihan'i eBusiness Visa eto.
Raha ho any amin'ny fitsaboana fitsaboana any India aho, misy fihevitra hafa na fepetra takiana ao amin'ny India Application visa Visa?
Raha mitsidika an'i India ianao Fitsaboana Avy eo dia takiana taratasy avy amin'ny hopitaly eo amin'ny lohan'ny hopitaly milaza ny tanjon'ny fitsidihanao, ny fomba fitsaboana, ny daty ary ny faharetan'ny fijanonanao. Raha mila tsipiriany misimisy momba fitsidihana eMedical Visa eto.
Raha toa ianao ka mila mpitsabo mpanampy na mpitsabo na mpikambana ao amin'ny fianakaviana hanampy anao, dia azo lazaina toy izany koa ao amin'ilay taratasy. A visa visa mpanatrika dia misy ihany koa.
Inona no tokony hantenako aorian'ny famenoana ny fampiharana Visa Indiana amin'ny Internet?
Rehefa vitanao ny taratasy fangatahana Visa Indiana dia tokony hamela anao ianao 3-4 andro fiasana handraisana fanapahan-kevitra. Ny ankamaroan'ny fanapahan-kevitra dia raisina ao anatin'ny 4 andro ary ny sasany dia maharitra hatramin'ny 7 andro.
Misy zavatra tokony hataoko ve rehefa avy nandefa ny taratasy Application Visa Indiana?
Raha misy zavatra takiana aminao avy eo dia hifandray ny ekipanay birao fanampiana. Raha misy fampahalalana fanampiny takian'ny mpiandraikitra ny fifindra-monina ao amin'ny Governemanta Inde, dia hifandray aminao amin'ny ekipan'ny mpanampy anay ny ekipa mpanampy anao. Tsy mila mandray fepetra ianao.
Hiresaka amiko ve ianao rehefa avy nandefa ny Fangatahana India Visa?
Mety tsy hifandray aminao amin'ny ankamaroan'ny tranga izahay afa-tsy ny handefasana anao ny vokatra Application Visa India Visa. Mety tsy hifandray aminao amin'ny tranga rehetra izahay.
Amin'ny salanisa kely / vitsy an'isa amin'ny tranga mety dia afaka hifandray aminao izahay raha tsy mazava ny sarinao ary tsy mifanaraka amin'ny Fepetra takiana amin'ny Visa any India.
Ahoana raha te hanova vaovao ao amin'ny India Application Visa Application aho taorian'ny fanekena?
Raha tsapanao fa nanao hadisoana tamin'ny fangatahana ataonao ianao, dia afaka mifandray aminay Help Desk ianao. Arakaraka ny sehatra misy anao ny fangatahanao, dia azo atao ny manova ny antsipiriany.
Afaka manova ny Visa mpizahatany any Visa ho amin'ny Business Visa sy ny mifamadika amin'izay aho rehefa avy nameno ny fangatahana India Visa India?
Taorian'ny fandefasana ny taratasy fangatahana India Visa dia afaka mifandray amin'ny Help Desk izahay, matetika raha mihoatra ny 5-10 ora ny fangatahanao aorian'ny fandefasanao ny fangatahana, dia mety ho tara loatra ho torolalana ankapobeny. Na izany aza dia afaka mifandray amin'ny solosaina fanampiana anay ianao ary afaka mandinika ny fanovana ny fampiharana anao.
Hamarino tsara fa mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny Governemanta Inde ny sarin'ny tarehinao. Ny kopia pasipaorinao dia tsy maintsy ho mazava sy azo hazavaina, maivana ihany koa, maizim-pito, maizina, tapaka, tsy misy feo, lava, sary miaraka amin'ny tselatra tsy ekena ho an'ny pasipaoron'ny pasipaoro.
Vakio bebe kokoa momba izany Fepetra takiana amin'ny Visa any India.
Vakio bebe kokoa momba izany Fepetra takiana amin'ny pasipaoro any India.